ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၈ ဦးကို ထိုင်းဘက်မှမြန်မာဘက်သို့ လာေ?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ မတ် ၂၁
ထိုင်းနိုင်ငံလူမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူထုလုံခြုံ ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဂေဟာများတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားသည့် လူကုန်ကူးခံရသူများအနက် နိုင်ငံသားစိစစ်မှုရရှိပြီးသူ လူကုန်ကူးခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၈ ဦးအားမတ် ၂၁ရက်၊ နံနက် ၁ဝ နာရီကထိုင်းနိုင်ငံမှတာဝန်ရှိသူများက ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ လူကုန်ကူးခံရသူများ ယာယီ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့လာ ရောက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နေရပ်ပြန်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်လက်ခံရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတား ဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ Pol.Col. Man Kleebsa ttabudl ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့တို့ကလိုက် ပါပို့ဆောင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီးပြန်လည်လက်ခံရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်မြဝတီခရိုင်လူမှုဝန် ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးဦး နေဝါထွန်းဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ လက်ခံကာကျေးဇူးတင်စကားများ ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်၊ ခရိုင်လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဆိုင်ရာရုံးမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးအမှတ် (၁) လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်း ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ (မြဝတီ)မှ တပ်ဖွဲ့စုမှူး၊ မြဝတီခရိုင်အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ တာဝန် ရှိသူများကနှစ်သိမ့်အားပေးကာ အသိပညာပေးစကားများပြော ကြားသည်။
”သူတို့ကို သုံးရက်ကြာယာ ယီလက်ခံစောင့်ရှောက်ထားပြီးလူ ကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲ တပ်ဖွဲ့ကလိုအပ်တဲ့ စုံစမ်းမှုတွေလုပ်မယ်။ လဝကအနေနဲ့လည်း လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေခရီးသွားထောက်ခံချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ သူတို့မိဘနေအိမ်ထိ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)မှ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဒေါ်ဇာဇာဝင်းကပြောကြားသည်။ ယခုလာရောက်လွှဲပြောင်း ပေးရာတွင်အမျိုးသားရှစ်ဦး၊ က လေးငယ်(ကျား)နှစ်ဦး၊ အမျိုးသမီး ခြောက်ဦး၊ကလေးငယ်(မ) နှစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၈ ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
ယခုနှစ် ချင်းတွင်းသင်္ကြန် ဈေးဆိုင်ခန်းများကို ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပြီး ယမန်နှစ?
ယောလေးမြို့တွင် တစ်မြို့ပါဝင်သည့် ”လောင်းရှည်မြို့”၏ နှစ်(၁ဝဝဝ)ပြည့်ပွဲတော်ကို လာမည့်နှစ်??
ပရီးမီးယားလိဂ်၏ အမြန်ဆုံး ကစားသမားများတွင် ဆာလက် အဆင့်-၁၈ သာရရှိ
စပါးကို ဂိုးပြတ် အရေးနိမ့်ပြီးနောက် မီဒီယာများကို မော်ရင်ဟို ဒေါသတကြီးဝေဖန်၊ အခက်ခဲဆုံး အ??